महिला सहभागिताका सवालमा संवैधानिक व्यवस्थाले बाध्यात्मक परिस्थितीको सिर्जना गरेको छ – Sadarline
बाँकेमा यस वर्ष छिट्टै योजना कार्यान्वयनको चरणमा
बृहद खजुरा सम्मेलन जारी विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत, आजै समापन हुने
सन्दर्भ : अन्तराष्ट्रिय महिला दिवश
महिला सहभागिताका सवालमा संवैधानिक व्यवस्थाले बाध्यात्मक परिस्थितीको सिर्जना गरेको छ
लक्ष्मी तिमिल्सेना २४ फाल्गुन २०७८, मंगलवार २०:५२
अन्तराष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवस , सन १९११ मार्च ८ अर्थात आजैका दिन नारी मुक्ति आन्दोलनकी प्रणोता क्लारा जेट्किनले महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणका विरुद्ध बुलन्द आवाज उद्घोष गरेको दिन । आजका दिन विश्वभर महिलाहरुको त्याग र समाजप्रतिको वलिदानका लागि महिलाहरुलाई प्रेम, प्रशंसा, आदर र सम्मान गर्ने दिनका रुपमा संसारभर मनाईंदै आईएको छ । यसै सन्र्दभमा अन्तराष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवस र नेपाली महिलाहरुको अवस्थाका वारेमा नेकपा एमाले केन्द्रिय कमिटी सदस्य तथा अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रिय सचिवालय सदस्य दिपा शर्मासंग संवादाता लक्ष्मी तिमिल्सेनाले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
अन्तराष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवसको महत्व के छ ? नेपाली महिला र यो दिवसको सम्बन्धलाई कसरी विस्लेषण गर्नुहुन्छ ?
यो दिवसको आफ्नै एउटा गर्विलो ईतिहास छ । सन १९११ मार्च ८ का दिन महिला अधिकारकर्मि क्लारा जेटकिनले महिला र पुरुषहरुमा समान ज्याला हुनुपर्ने भन्दै महिला वादी महान आन्दोलनको सुरुवात गरेको दिनलाई विश्वभरका महिलाहरुले उत्सवका रुपमा मनाउदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली महिलाईहरु पनि विश्वका घटना परिघटनाबाट पर हुन सक्दैनन् । यसकारण यसको असर नेपालमा पनि पर्यो । तत्कालीन अवस्थामा थोरै महिलानेताहरुले यस आन्दोलनलाई समात्दै नेपालमा पनि यस्ता कुराहरु लागु हुनुपर्छ भन्ने निचोड निकाली सकेपछि नेपालमा पनि यो दिवस मनाउन थालिइको हो । त्यसको फलस्वरुप आज हामि महिला अधिकारका सवालमा दक्षिण एशियामै अग्र स्थानमा छौं ।
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा श्रमीक महिला अधिकार र नेपाली श्रमीक महिलाहरुको अधिकारको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
महिलाहरुको हकअधिकार सुनिश्चिित गर्ने तथा निति निमार्ण गर्ने सवालमा कुरा गर्दा नेपाल दक्षिण एशियाकै पहिलो यस्तो मुलुक हो जसले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । यसकारण हामी बाट विश्वले सिक्नु पर्छ भन्ने मा जोड दिन्छु म त । यति भनिरहँदा फेरि हाम्रो कमजोरी पनि कहाँनिर छ भने हामिले निर्माण गरेका नितिहरुको कार्यान्वयन हामिले पुर्ण रुपमा गर्न सकेका छैनौं ।
तपाई आफै पनि राजनीतिक महिला हुनुहुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ? खासगरि यस क्षेत्रमा महिलाका अवसर र चुनौती के के छन् ?
संविधानमा व्यवस्था गरिएका कुराहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिएमात्रै पनि महिलाका आधा भन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छन् । यसकारण अहिले संवैभानिक दृष्टिकोणले हेर्नेहो भने थुपै्र अवसरहरु छन् । गएको स्थानीय तहको चुनावमा पनि राष्टपती देखी लिएर वडा सदस्य सम्म करिव साढे ६ हजार महिला जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएर आउनुभयो । यो हाम्रालागि निक्कै ठुलो अवसर थियो । तथापि चुनौति के छ, भन्नुहुन्छ भने । यति हुंदापनि प्रमुख पदहरुमा महिलाहरुलाई विश्वास गर्न सकेको अवस्था छैन ।
महिला सहभागिताका सवालमा संवैधानिक व्यवस्थाले बाध्यात्मक परीस्थितीको सिर्जना गरेको छ । जसकारण राजनितिमा महिला सहभागिता बढेको हामि देख्न सक्छौं । तर, अंझैपनि ‘‘महिलाले के गर्न सक्छन् र’’ भन्ने पुरुष प्रधान सोच छ । यसरी हेर्दा नेपाली राजनैतिक वृत्तमा महिला नेतृत्वलाई अपनाउने सवालमा कस्तो स्थिति छ ? तपाईको अनुभव के छ ?
यो पुरुष प्रधान समाजको सोचको उपज हो भन्छु म त । मैले अगि पनि भने महिलाहरुलाई विश्वास गर्न सकेको अवस्था छैन । जसका कारण राज्यले प्रमुख पदहरुमा महिलालाई राख्न अंझैपनि डराएको अवस्था छ । २०६२–६३ को आन्दोलन जब म विद्यार्थी नेता थियं । त्यसबेला हामिले थुप्रै कामहरु गर्यौं । तर म अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुं भन्दा नपत्याउने वातावरण थियोे । महिलाको सवालमा अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । जवसम्म यो मानसिकताको जग भत्किंदैन तबसम्म हामिलाई राज्यले दास्रो दर्जाकै रुपमा हेर्छ ।
सबल र समृद्द बन्नका लागि महिलाहरुले अवको यात्रा कसरी तय गर्न आवश्यक छ ? संधै ईतिहास गाएर मात्रै त नहोला नि ?
ज्हिले पनि हामिले ईतिहासबाट सिकेर नयाँ पद्दती अवलम्बन गर्यौं भने मात्रै महान महिलावादी आन्दोलनले सार्थकता पाउछ । जहाँसम्म ईतिहास गाउने कुरा छ । त्यो त हामिले विर्सनै नहुने कुरा हो । पछिल्लो समय परिवर्तन संगै महिलाहरुका लागि नयाँ खालका समस्याहरु पनि देखा परेका छन् । यसको समाधानका लागि हरेक महिलालाई शिक्षित बनाउनुका साथै आत्मनिर्भर बनाउन सक्यौ भने हामी सबल र समृद्द हुन सक्छौं ।
बाँकेमा चार संक्रमित थपिए
२४ फाल्गुन २०७८, मंगलवार २०:५२
नेपालगञ्ज : बाँकेमा बुधवार थप ४ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । ५९ जनाको पीसीआर परीक्षणमा ४ जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो । भेरी अस्पतालको पीसीआर प्रयोगशालामा १७ जनाको परीक्षण गर्दा १ जना र मेडिकल कलेज कोहलपुरमा ३३ जनाको परीक्षण गर्दा ३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ […]
३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०७:१३
सकियो नेपालगञ्जमा जारी प्रादेशिक महोत्सव
१४ पुष २०७८, बुधबार १५:२७
बाँकेमा एकजनामा मात्र कोरोना देखियो
२० बैशाख २०७८, सोमबार १३:५३
बाँकेमा २७ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप
२४ श्रावण २०७४, मंगलवार १८:१०
३ कार्तिक २०७३, बुधबार १४:५६
५ श्रावण २०७४, बिहीबार ००:११